रौँ हटाउने उत्तम विधि : लेजर हेयर रिमुभल
मुख्य पृष्ठसौन्द्धर्य स्वास्थ्यरौँ हटाउने उत्तम विधि : लेजर हेयर रिमुभल
डा. बन्धना झा
छाला तथा कपाल विशेषज्ञ
लेजर हेयर रिमुभल (एलएचआर) अहिलेसम्मकै कपाल (रौँ) हटाउने विधिहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम विधि हो ।
प्लकिङ, थ्रेडिङ व्याक्सिङ, इपिलेसन, इलेक्ट्रोलाइसिसलगायतका अन्य कपाल हटाउने परम्परागत विधिहरूको तुलनामा एलएचआरले मात्र दीर्घकालीन परिणाम प्रदान गर्न सक्छ । सेलिब्रेटीहरूबाट समेत विश्वास गरिएको, एलएचआर प्रक्रियाले मासिक पार्लर र सैलुन जानबाट स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । एलएचआर एक चिकित्सा प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियामा प्रकाशको बीम (लेजर)को प्रयोग गरेर शरीरका अनावश्यक कपाल (रौँ) हटाइन्छ ।
शरीरमा अनावश्यक कपालको वृद्धिलाई कम गर्नका लागि एलएचआर प्रयोग गरिन्छ । एलएचआर प्रक्रियाको क्रममा, लेजरले प्रकाशको उत्सर्जन गर्छ जसलाई कपालमा हुने पिगमेन्ट मेलानिनले सोसेर लिन्छ । तापमा परिवर्तन हुने प्रकाशले कपालको जरामा क्षति पुर्‍याई प्रभावी ढङ्गले लामो अवधिसम्मका लागि कपालको विकासलाई ढिलो पार्छ । अपेक्षित परिणामका लागि एलएचआरका बहुसत्र (मल्टिपल सेसन्स) आवश्यक छन् । र, त्यसपछि प्रत्येक छदेखि १२ महिनासम्म मेन्टेनेन्स आवश्यक पर्छ । एलएचआर आँखा वरपरका क्षेत्रबाहेक शरीरका जुनसुकै भागमा पनि गर्न सकिन्छ ।
१५ वर्ष वा माथि उमेरकालाई शरीरमा अनावश्यक कपाल हटाउन, महिलामा पुरुष जस्तै कपालको वृद्धि हुँदा, मेडिकल उपचार प्रयोजनका लागि उपचारात्मक उद्देश्यले कपाल हटाउन एलएचआर गर्न सकिन्छ । तर, १५ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, तत्काल परिणाम चाहनेहरूका लागि, गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका तथा गर्भवती हुने कोसिस गरिरहेका, छाला सङ्क्रमणको उपचार गरिरहेका, सूर्यको प्रकाशमा संवेदनशील हुने औषधिको प्रयोग गरिरहेका, सोरायसिस, एसएलई वा भिटिलिगो भएका, चोटपटक भएको उपचार क्षेत्रमा, ओठमा घाउको पछिल्लो इतिहास भएकाले एलएचआर विधि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
एलएचआर प्रक्रियाको क्रममा, लेजरले प्रकाशको उत्सर्जन गर्छ जसलाई कपालमा हुने पिगमेन्ट मेलानिनले सोसेर लिन्छ । तापमा परिवर्तन हुने प्रकाशले कपालको जरामा क्षति पुर्‍याई प्रभावी ढङ्गले लामो अवधिसम्मका लागि कपालको विकासलाई ढिलो पार्छ ।
छालालाई घामबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ । कपाल हटाउनका लागि सेभिङ गर्न सकिन्छ । एलएचआरको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि कम्तिमा चार हप्ताअघि प्लकिङ, व्याक्सिङ र इलेक्ट्रोलिसिस तथा छालालाई ब्लिच गर्नु हुँदैन ।
एलएचआर प्रक्रियाको समयमा
प्रत्येक उपचारको सेसनका लागि, लेजरको बिमबाट आँखालाई बचाउनका लागि चश्मा लगाउनु पर्छ । त्यसपछि कुल जेलको प्रयोग गरिन्छ । चिसो टिप भएको उपकरणको माध्यमबाट उपचार क्षेत्रमा लेजरको किरण पठाइन्छ । प्रक्रियाको समयमा हल्का असुविधा, वा सियोले घोचेको जस्तो महसुस हुन सक्छ ।
एलएचआर प्रक्रिया गरिसकेपछि पहिलो केही घण्टादेखि केही दिन छाला रातो भएको देख्न सकिन्छ । यो सामान्य हो र यसलाई कम गर्नका लागि आइसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एलएचआरबाट के आशा राख्ने ?
एलएचआर गर्नका लागि चारदेखि छ हप्ताको अन्तरालमा छदेखि आठ सत्रहरू आवश्यक पर्छ । एलएचआर गर्नेबित्तिकै कपाल तुरुन्तै झर्दैन । तर, केही दिन वा हप्ताको अवधिमा हराउँदै जान्छ । एलएचआर गरेपछिको नतिजा व्यक्तिमा फरक–फरक हुन्छ, जसकारण पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुन्छ ।
एलएचआर किन रोज्ने ?
स्थायी परिणाम, सुरक्षित, अन्य विधिहरूको तुलनामा सस्तो (आजीवन व्याक्सिङ गर्नका लागि चाहिने खर्च एलएचआरको कुल खर्चभन्दा धेरै बढी हुन्छ), एलएचआर सेसनको बीचमा कपाल बढ्दैन तथा भित्री छालाबाट कपाल बढ्नबाट पनि रोक्छ ।
एलएचआर प्रक्रियाको भ्रम तथा त्यसका तथ्यहरू :
तथ्य : एलएचआर गर्दा हल्का घोचेको जस्तो महसुस हुन सक्छ । यसलाई कम गराउनका लागि छाला लठ्ठ पार्ने क्रिमको प्रयोग गरिन्छ ।
तथ्य : इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि छदेखि आठ प्रक्रिया गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, पहिलो पटकमै केही फरक भने अवश्य देखिन्छ ।
भ्रम : एलएचआर कुनै पनि पार्लरमा गएर गर्न सकिन्छ ।
तथ्य : एलएचआर गराउनका लागि प्रमाणित छाला रोग विशेषज्ञकोमा नै जानु पर्ने हुन्छ ।
भ्रम : एलएचआर महिलाहरूले मात्र गर्नु पर्छ ।
तथ्य : एलएचआर पुरुषहरूमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ । दाह्री बनाउन, अण्डरआर्म्स, छाति, पेट, पछाडि र हातलगायतका क्षेत्रमा पुरुषहरूले एलएचआर रोजेका छन् ।
भ्रम : एलएचआर अन्य कपाल हटाउने विधिहरूभन्दा महँगो हुन्छ ।
तथ्य : एलएचआर गर्दा एकै समय लाग्ने पैसा महँगो लाग्न सक्छ । तर, जीवनकालभरि गरिने सैलुन प्रक्रियामा हुने खर्चभन्दा धेरै कम छ ।
भ्रम : एलएचआरले क्यान्सर र बाँझोपन निम्त्याउन सक्छ ।
तथ्य : लेजरद्वारा उत्सर्जित बिम केवल छालामा तीनदेखि चार एमएम गहिरोसम्म पुग्छ, जसकारण आन्तरिक टिस्यु प्रभावित हुने कुनै सम्भावना रहँदैन ।
भ्रम : घरमा प्रयोग गरिने साना लेजर उपकरण क्लिनिकमा प्रयोग गरिने जस्तै हुन् ।
तथ्य : यो भ्रम हो । घरमा प्रयोग गरिने साना लेजर उपकरण क्लिनिकमा प्रयोग गरिने जस्तो हुँदैनन् । ती उपकरणबाट आएको नतिजा असन्तुष्ट र अपूर्ण हुन सक्छ । त्यस्ता उपकरणमा पैसा खर्च गर्नु व्यर्थ हुन सक्छ ।